Telefoonada ugu fiican ee Android: tijaabooyinka, bilaabista, xanta ... | Androidsis (Bogga 21)
Sheegasho Xiaomi Redmi 6 ayaa ku daatay TENAA
Sheegasho Xiaomi Redmi 6 ayaa hadda la siidaayay iyadoo ay weheliyaan dhowr astaamaheeda iyo qeexitaanno farsamo oo ah bogga rasmiga ah ee TENAA Qalabkani wuxuu u iman doonaa inuu ku guuleysto Redmi 5, mid ka mid ah kuwa ugu caansan bartamaha shirkadda Shiinaha maanta. Waxaan kuu fidineynaa warka!
Noocyada iyo qeexitaannada farsamo ee Xiaomi Mi 8 ayaa xaday ka hor intaan la soo bandhigin
Xiaomi Mi 8-kii hore ee loo yaqaan Mi 7- ayaa hada lagu daadiyey Weibo iyadoo ay weheliyaan dhowr astaamo iyo tilmaamo farsamo ka hor intaan la bilaabin maalmaha soo socda ee ka dhici doona Shiinaha. Waan ku ogeysiineynaa!
Xiaomi wuxuu xaqiijinayaa inaysan jiri doonin Xiaomi Mi 7
Xaqiijiyay: Ma jiri doono Xiaomi Mi 7, kaliya Mi 8 ayaa la bilaabi doonaa. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan xaqiijinta inaan kaliya arki doonno dhamaadka sare ee dhacdada Shiinaha.
Sawirradii ugu horreeyay ee Xiaomi Mi Band 3 waa la sifeeyey
Sawirada uguhoreeya waxa noqon doona jiilka seddexaad ee Xiaomi Mi Band 3 hada waa la sifeeyey, iyo halka aad ku arki karto naqshad sii socota laakiin shaashad leh macluumaad dheeri ah.
LG wuxuu bilaabayaa LG V35, Q7, Q7 Plus, X5 iyo X2 bisha Juun
LG wuxuu bilaabi doonaa LG V35, X5 iyo X2 Koonfurta Kuuriya bisha Juun. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefannada ay soo-saaraha qorsheynayaan inuu ka furo waddankaaga inta lagu jiro bisha Juun.
OnePlus 6 wuxuu helayaa 5 10kiiba XNUMX dhibcaha iFixit
Dayactirka uu bixiyay OnePlus 6 wuxuu udhaxeeyaa kalabar inta udhaxeysa dhibic wanaagsan iyo mid xun, iyadoo kaliya 5 kamid ah 10-kii.
XANTA: Sony ayaa joojin karta sameynta taleefannada gacanta
XANTA: Sony ayaa joojin karta sameynta taleefannada casriga ah. Raadi wax badan oo ku saabsan warkan oo macnaheedu noqon karo in sumadda Japan ay joojiso soo saarista taleefannada gacanta.
HTC U12 +: Shirkadda cusub ee HTC ayaa hadda rasmi ah
HTC U12 +: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah. Waxbadan ka ogow calanka cusub ee soo saaraha shirkada Taiwan oo maanta si rasmi ah loo soo bandhigay.
Telefoonka Razer waxaa lagu casriyeeyay qaab sawir cusub
Qalabka soo saaraha Razer ayaa hadda soo saaray cusbooneysiin cusub oo loogu talagalay Razer Telefoon kaas oo diiradda saaraya ku darista qaab sawir wanaagsan.
MIUI 10 wuxuu imaan doonaa Maajo 31 oo ay weheliso Xiaomi Mi 8
MIUI 10 waxaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa May 31. Ka ogow wax badan oo ku saabsan imaanshaha lakabka cusub ee shakhsiyeynta loogu talagalay taleefannada Xiaomi ee imaan doona dhacdada ay calaamadda Shiinaha qorsheysey.
OUKITEL K7: Taleefanka casriga ah ee ugu raqiisan batari dhan 10.000 mAh
OUKITEL K7: Taleefanka cusub ee leh batari 10.000 mAh ah. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan aaladda aaladda cusub ee u taagan baterigeeda weyn.
Meizu M6T wuxuu ka muuqanayaa Geekbench oo leh Spreadtrum SoC
Meizu M6T wuxuu ka soo muuqday dhawaanahan keydka xogta Geekbench, mid ka mid ah jaangooyooyinkii ugu caansanaa ee halkaas ka ag dhowaa AnTuTu. Terminalkan waxaa lagu shaqeyn lahaa, sida ku cad qoraalada la bixiyay, oo ah processor-ka ay leedahay shirkadda Spreadtrum ... Waxaan ka hadlaynaa SC9850.
OnePlus 6 waa taleefanka ugu iibsiga badan uguna magaca badan
OnePlus 6 waa taleefanka ugu iibinta badan calaamadeynta bilowga. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan iibka wanaagsan ee dhamaadka-sare ee guusha u ah soo saaraha Shiinaha.
Imaatinka LG Q7 ayaa loo xaqiijiyay Spain. Ogow qiimaheeda!
Shirkadda weyn ee Kuuriyada Koofureed ee LG ayaa dhowaan xaqiijisay in LG Q7 uu imaan doono dhulka Isbaanishka, in kasta oo uusan shaacin taariikhda saxda ah ee aan ku arki doonno bartankan cusub ee shalay la soo bandhigay, haddana waxaan horeyba u helnay macluumaad ku saabsan qiimo jaban qiimaha taas oo lagu qeexi doono.
Dib u eegida OUKITEL U18
OUKITEL U18, oo ah taleefan casri ah oo shaashaddiisu dhan tahay "Notch" kana fiican qaabka ugu fiican ee iPhone X, kaas oo isna u taagan 4 GB RAM, 64 GB memory iyo 4000 mAh battery. Waxaan kuu sheegeynaa astaamaheeda, qiimaha iyo haddii ay runtii u qalanto.
Samsung waxay ku shaqeyneysaa smartwatch oo leh Wear OS
Samsung waxay la shaqeyn laheyd saacad leh Wear OS. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan saacadda loo malaynayo ee ka imaan doonta nooca Kuuriya sannadkan.
Iibinta Lenovo ayaa wali hoos ugu sii dhaceysa Shiinaha
Lenovo waxay u taagan tahay kaliya 0,4% suuqa Shiinaha. Wax badan ka ogow iibka sumcadda ee Shiinaha, halkaas oo uu ku lumiyay qaybtiisa suuqa.
Sifeeyay naqshadeynta iyo qeexitaanka Moto Z3 Play
Shaandheeyey qeexitaanka iyo naqshadda Moto Z3 Play. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ee nooca ee la filayo in lagu soo bandhigo suuqa dhammaadka sanadkan.
Huawei Enjoy 8 waxaa laga bilaabay Shiinaha waana astaamahiisa
La kulan Huawei Enjoy 8, aalad la timaada astaamo sifiican loogu hagaajiyay waxa ay balanqaaday, taas oo aan ka helayno guddi 18: 9 ah, processor Qualcomm SD430, iyo naqshad nadiif ah oo miiska saaran oo miiska saaran sida quruxda badan , mobiil xarrago leh oo awood badan. Waan kuu soo bandhigeynaa!
Jaangooyada ugu horreysa ee Galaxy Note 9 ayaa ina ogeysiinaysa qeexitaankiisa
Halbeegga ugu horreeya ee Galaxy Note 9 ayaa hadda lagu sifeeyay Geekbench, oo ah jaangoyn xaqiijineysa qaar ka mid ah wararka xanta ah ee illaa iyo hadda tilmaamaya bedelka Galaxy Note 8.
Naqshadaynta LG G7 ayaa mar kale daadinaysa: darajada waa la xaqiijiyay
Wuxuu daadiyay naqshadda LG G7 ee xaqiijineysa inay jiri doonto qaanuun. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan naqshadeynta LG G7 oo mar labaad la daadiyay oo dib u xaqiijineysa in dhamaadka-sare uu yeelan doono qaan-gaar.
Sawirka rasmiga ah ee ugu horreeya ee OnePlus 6: qormooyinka waa la xaqiijiyay
OnePlus 6 wuxuu leeyahay aragti: Sawir rasmi ah oo rasmi ah. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka dhamaadka sare ee sumadda Shiinaha ee yeelan doonta darajo, wax ay adeegsadayaal badani ka baqeen.
Sawirka xaday ee OnePlus 6 ayaa muujinaya 3.5mm Jack iyo USB-C
The OnePlus 6 waxaa lagu arkaa muuqaal sir ah oo laga helay Twitter-ka wuxuuna muujinayaa aaladda codka ee 3.5mm, isku xiraha USB-C iyo in ka badan.
La kulan Huawei Y7 Prime (2018), xubin cusub oo ka tirsan shirkadda dhexdhexaadka ah
Waxaan soo bandhigeynaa Huawei Y7 Prime (2018), oo ah terminaal la keenayo qeexitaanno iyo astaamo u qalma awood, laakiin, isla mar ahaantaana, taleefan casri ah oo dhaqaale, iyada oo aan laga wada hadlin, qayb weyn ka qaadan doono suuqa kala duwan. Waxaan kuu fidineynaa warka!